Dumarka ku nool Kampala, Uganda oo wajahaya halista ugu badan caalamka - BBC News Somali
Dumarka ku nool Kampala, Uganda oo wajahaya halista ugu badan caalamka
2 Oktoobar 2018
Lahaanshaha sawirka Plan International
Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa ah magaalada gabdhaha ugu badan ay halis ugu jiraan afduub iyo dil, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay hay'adda Plan International.
Sida ku cad daraasaddani oo ay sameeyeen khubaro caalami ah isla markaana maanta la shaaciyay, 90% dadkii wareysiga lala yeeshay ayaa sheegay in afduubku uu aad u badan yahay magaaladaasi isla markaana gabdho badan oo ku nool Kampala ay halis ugu jiraan afduub.
Sidoo kale 66.7% dadkii la wareystay ayaa sheegay in dilka uu haatan yahay halista ugu weyn ee ay wajahayaan gabdhaha iyo dumarka ku nool magaalada Kampala.
Daraasaddan ayaa ka fajicisay Sharon oo 19 jir ah, isla markaana ah hooyo haysata wiil yar oo 18 bilood oo kaliya jira, kuna nool xaafad isku raran ah oo ka tirsan magaalada Kampala.
"Afduubka ayaa halkan aad ugu badan oo waxa aad maalin kastaa maqleysaa dad ayaa la dilay, gabar ayaa la kufsaday ama xitaa la qafaashay."
"Arrintan ayaa cabsi amaandarro igu abuureysa. Xilli dambe ayaan shaqeeyaa ,waxa ayna ila tahay in maalin uun aniguna aan noqon doono dhibbane," ayay tiri Sharon.
Daraasaddan ay soo saartay Plan International ayaa muujineysa in gabdhaha caalamku ay ku khasbanaadeen in ay wax ka badalaan qaab nolaleedkooda si ay ula tacaalaan halista ay kala kulmayaan magaalooyinkooda.
Sharon ayaa sheegeysa in gabdhaha ay cabsidan ku khasabtay in ay wax badan ka badalaan nolashooda, gaar ahaanna dhaqdhaqaaqooda iyo qaabka ay u lebistaan, iyo sidoo kale in ay badalaan waddooyinka ay u maraan shaqadooda.
"Inta badan, waxaan isku daynaa in aanan luuqyada marin oo aan marno waddooyinka waaweyn."
Lahaanshaha sawirka Plan International / Heba Khalifa
Sharon ayaa 30 daqiiqo oo kaliya u lugeyn jirtay goobteeda shaqada balse haatan saacad iyo bar ayay ku qaadataa in ay gaarto goobteeda shaqada, sababtoo ah waxa ay soo martaa waddo dheer si ay uga wareegato goob lagu kufsaday gabar ay saaxibbo yihiin.
"Dhismo duugoobay oo iskuul ahaan jiray ayaa ku yaal halka aan deggannahay, waxaana halkaasi gabbaad ka dhigta dadka daroogada ka ganacsada," ayay tiri Sharon.
"Aniga iyo gabdhaha aanu saaxibbada nahay waxaan mari jirnay meeshaasi xilliyada habeenkii markaan shaqada ka nimaadno. Balse habeen habeennada ka mid ah ayaa saaxibtey oo maqaaxi ka shaqeysa waxa ay tagsi kaga degtay agagaarka dhismahaasi gaboobay, kaddib iyada oo luegynaysa abaarihii tobankii fiidnimo ayaa waxaa halkaasi ku kufsaday afar nin.
"Waxa ay doonayeen in ay ka qaataan shandaddeeda iyo taleefoonkeeda balse waa ay diiday. Kaddib inta ay kufsadeen ayay goobta isaga carareen. Booliska ayay ku wargelisay dhibkaasi soo gaaray balse ilaa haatan ma aysan soo qaban raggii kufsaday."
Sharon ayaa haatan ka mid ah 2,000 oo gabdhood oo ku nool Kampala oo ka qeybqaadanaya ololaha haydda Plan International ee looga golleeyahay sidii loo sugi lahaa ammaanka gabdhaha iyo dumarka caasimadda Kampala.
Lahaanshaha sawirka Plan International / Vivek Singh
Barnaamijkan oo loogu magac daray badqabka dumarka ayaa lagu tababaray ilaa 720 gabdhood iyo 78 rag ah oo dhammaantood la baray sida loo looga hortago dhibaatooyinka ka dhanka ah dumarka.
Mas'uuliyiinta Kampala ayaa sidoo kale qaaday tallaabooyin dhawr ah oo lagu sugayo ammaanka, sida in kaamerooyin lagu rakibo waddooyinka.
Sidoo kale barnaamijkani ayaa aad u dhiirigeliyay dumar ay Sharon ka mid tahay.
"Tan iyo markii aan ku biiray barnaamijkani badqabka dumarka, waxaan ogaaday in rajo ay jirto mustaqbalka. Kampala ayaa noqon karta mid ka wanaasgan sida ay hadda tahay," ayay tiri Sharon.
Daraasadda Plan International ayaa lagu saleeyay xog laga soo uruuriyay 22 magaalo oo ku yaal lix waddan, waxaana ka qeyb qaatay khubaro caalami ah oo tiradooda tahay 400 oo qof.